20 Feb 1982: Maalin Dhiidhi Dhallinyaro iyo Kacdoon Dadweyne! – Wargeyska Waxgarad
Home / Aragti / 20 Feb 1982: Maalin Dhiidhi Dhallinyaro iyo Kacdoon Dadweyne!
Maxamed Baashe Xaaji Xasan February 20, 2018	Aragti, Taariikh 67,053 Views
Feberwari 20’keedii, 1982, waxa Hargeysa oo ahayd magaala madaxdii labaad ee Jamhuuriyaddii Dimoqraaddiga ahayd ee Soomaaliya ka dhacay kacdoon weyn oo ay bilaabeen ardaydii dugsiyada sare ee magaalada Hargeysa, taas oo dhaqaajisay dadweynihii magaalada oo gadood kala hor yimi xukuumaddii kelitaliska ahayd ee xoogga badnayd ee Maxamed Siyaad Barre . Warbixintan hoose waxa ay ka hadlaysaa kacdoonkaas iyo natiijooyinkii ka dhashay iyo xidhiidhka ay maanta la yeelan karaan waayaheenna siyaaso-bulsheed.
Arrintaasi waxa ay soo dedejisay in dabayaaqadii sannadkii 1981 kii xabsiga loo taxaabo dhallinyaradaas oo lagu eedaynayo inay duminayeen qarankii ay doonayeen in ay dhisaan. Ficiladaas samadawdarnimo waxa ay sababtay kacdoonkii ardaydu hagayeen ee Hargeysa ka dhacay bishii Febarwari 20’keedii illaa 23’keedii ee sannadkii 1982 maalintii Sabti ee maxkamadda la keenayey dhallinyaradaas xidhxidhnayd ee UFO.
Waxa la xidh xidhay dad badan, waxana si xoog ah loo cabbudhiyey dhawaaqii xorta ahaa ee dadweyne. Waxa aan xusuustaa tacshiiraddii rasaaseed ee nacweynida lahayd ee ciidamadii dawladdu noo adeegsadeen. Waxa aan xusuustaa toogashadii naxariis darrada ahayd ee lagu diley ardaygii bannaanbaxyadaas ku geeriyoodey 20-kii Feberwari sannadkii 1982 duhurnimadii Alle ha u naxariisto’e Barre Xaaji Cilmi Axmed (Badh-dho). Waxaan kaloo xusuustaa cidhiidhigii iyo diiqaddii siyaasadeed ee maalintaas Hargeysi gashay ee u sii jiitamey xaaladihii bandowga, dhaca iyo boobka, gumaadka iyo xasuuqa aan kala sooca lahayn illaa laga gaadhay dumintii iyo burburintii waynayd oo buugaagta taariikhda balasheeda ku soo noqnoqon doonta.
Sannad guuradii 1aad ee ka soo wareegatey Gadoodkayagii ardayeed ee 20’kii Feberwari 1983 xuskeedii oo Axad ku beegnaa waxa aan ka mid ahaa koox arday ah oo la qaqabtay. Maamulayaashii dugsiyada ayaa halkii aannu ku xidhnayn naloogu keenay. maamulihii dugsigaygii aan u beddeshey ee Gacan Libaax, Muuse Madoobe, ayaa aniga iyo dhawr arday oo kale naqwo ahaan noola baxay oo naga sii daayey askartii aannu u xidhnayn. Maamule kastaa dhawr arday oo uu weji yaqaanney ama ay si kale isugu xidhnaayeen ayuu ka naqaystay maxaabiistii. Aniga iyo Muuse Madoobe wax aan arday iyo maamulihiis ahayn nagama ay dhaxayn. Keliya waxa uu Muuse ogaa in aan ka mid ahay ardayda ugu waxbarashada jecel.
20’kii Feberwari 1983, waxaannu barqo dambe ka soo dhaqaaqnay dugsigii Sare ee Gacan Libaax, annaga oo foolka saarayna dhankii faras magaalaha. Socod cabbaar ah ka dib markii aannu ku soo dhowayn obocda suuqa weyn ee Hargeysa oo aannu jaadlayaashii, basaskii iyo tagaasidii oo is dhinacyo tuban soo dhex qaadnay, ayaa waxa dhexdayada ka oogsatey oo ka kacday koox arday ah oo walaandaynaysa shubaal ahaan hal-ku-dhig cusub oo ahaa: “ Dooni mayno Daarood; ha dhaco Daarood iwm!” Dhegaha ayaa la wada taagey! In badan baa arrintaas la yaabtay, waayo fal noocaas oo kale ahi qorshaha nooguma uu jirin. Waxa nala socda arday Daaroodkan la haaraamayo ku abtirsada. Gurey oo Reer Garoowe ah iyo Shiine oo reer Yagoori ah oo aannu weliba isaga qaraabo nahay, ayaa safka nagula jira. Inammo iyo hablo kale oo qabiilkaas carrabka lagu ballaadhinayo ku abtirsadaana ayaa ardayda ka mid ahaa! Waa tan arrinta fajacisada abuuraysaa, maantana soddon sonnadood ka dib qiimaynteedu xiisaha yeelanaysaa.
Previous Afkeennu ma hodan baa?
Next Xoogga Debecsan